Naannoo gabatee tokkotti barruu dhangeessuudhaaf, gabaticha goodayyaa tokko keessa kaa'i, kana booda barricha naannoo goodayyiichaatti mari.
Dirqalaawwan maraa barruu ifteessi.
Barruu naannoo boca wantaa qofatti maraa, garu, bakkawwan banaa boca wantaa keessaatti hin maru. Dirqalii kun goodayyaadhaaf hinjiru.
Wanta filatameefi barruucha gidduutti iddoo hamma dhiisuu barbaadduu ifteessi.
Qarree bitaa kan wantichaa fi barruchaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu galchi.
Qarree mirgaa kan wantichaa fi barruchaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu galchi.
Qarree irraa, kan wantichaa fi barruchaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu galchi.
Qarree jalaa, kan wantichaa fi barruchaa giduutti iddoo hamma dhiisuu barbaaddu galchi.
Title is: Maraa